Umngcipheko kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra unika ukufikelela komlawuli kwi-Mac.Sikubonisa isisombululo sethutyana | Iindaba zeGajethi
I-MacOS, eyayibizwa ngokuba yi-OS X, inkqubo yokusebenza kweMac, ihlala ibonakalisiwe, ubuncinci kwithiyori, njengenye yezona zikhuselekileyo kwikhompyuter, kunye neWindows yeyona ihlala ibeka ezona ngxaki zinkulu. Kodwa ayisiyonyani ngokupheleleyo, kuba ii-macOS, ezinje ngeWindows kunye nezinto ezahlukeneyo zeLinux, Zonke zinemingxunya yokhuseleko.
Eyona yamva nje sele ifunyenwe kwaye ibeka umngcipheko obaluleke kakhulu kwidatha egcinwe ngaphakathi kuyo, ichaphazela iiMacs ezisebenzisa uguqulelo lwamva nje lweMacOS High Sierra. Obu bungozi busivumela ukuba singene kwimowudi yomlawuli kwiakhawunti yeendwendwe, iakhawunti ngokubanzi ayisoloko inegama eligqithisiweyo, kungoko igama layo. Nje ukuba singene, sinokutshintsha iphasiwedi yomlawuli ngaphandle kokuyazi nangaliphi na ixesha, kuba isibonisa ngokuthe ngqo iwindow yokutshintsha iphasiwedi yomlawuli, njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla.
Ukuze sikwazi ukwenza oku, kufuneka sikwazi ukufikelela kwiiNkqubo ezikhethwayo zeakhawunti yethu yomsebenzisi, cofa kwindawo evaliweyo ebekwe kwikona esezantsi ekhohlo. Emva koko sibhala igama "ingcambu" njengegama lomsebenzisi kunye Cofa iqhosha lokungena amatyeli aliqela ude uyamkele. Nje ukuba le nkqubo igqityiwe, sinakho ukulawula umlawuli we-Mac esiyisebenzisayo.
Lungisa lo mba wezokhuseleko we-macOS
Isisombululo sokuqala kukukhubaza umsebenzisi weendwendwe, inkqubo esinokuyenza ngokuKhetha kweNkqubo njengoko kucacisiwe apha ngezantsi.
Ngaphakathi kukhetho lweNkqubo esiya kulo Abasebenzisi kunye namaQela.
Ngaphakathi Abasebenzisi kunye namaQela, sikhetha Umsebenzisi weNdwendwe.
Ke Siphelisa ukhetho Pvumela iindwendwe ukuba zinxibelelane nale khompyutha.
Kodwa ukuqiniseka ngokupheleleyo kwaye ukuba iibugs ezintsha zolu hlobo zinokubeka ukhuseleko lolwazi esilugcina kwikhompyuter yethu emngciphekweni, kufuneka sitshintshe igama eligqithisiweyo lengcambu, elidityaniswa ngumsebenzisi "wengcambu". Ngale nto siza kuqhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
Sinqwenela ukuya Ukhetho lwenkqubo.
Cofa apha Abasebenzisi kunye namaQela kwaye ukhethe u-Oiinketho zokuqalisa.
Emva koko cofa apha Iseva yeakhawunti yenethiwekhi, kwaye ucinezele Isixhobo esivulekileyo soLawulo.
Kwinyathelo elilandelayo, siya kwimenyu yokuHlela kwaye ukhethe CGuqula iphasiwedi yomsebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Ukuba semngciphekweni kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra kunika ukufikelela kumlawuli kwi-Mac.Sikubonisa isisombululo sethutyana